Ajanony ny fitenenana fa mihena ny vanim-potoanan'ny fifantohana, TSY IZANY! | Martech Zone
Talata, Desambra 23, 2014 Talata, Desambra 23, 2014 Douglas Karr
Tianay ny atin'ny snackable tahaka ny olona manaraka, saingy mino aho fa misy hevi-diso diso lehibe eo amin'ny indostrianay. Ilay hevitra hoe mihena ny faharetan'ny fifantohana mila teny manodidina apetraka manodidina azy. Voalohany, tena tsy ekeko fa mandany angovo bebe kokoa ny olona hampianarana ny tenany momba ny fanapahan-keviny manaraka.
Ireo mpanjifa sy orinasa nandany fotoana be talohan'ny nanaovana fikarohana dia mbola manao fikarohana marobe ankehitriny. Nihazakazaka aho Analytics tatitra manerana ny mpanjifanay rehetra ho fanomanana an'ity lahatsoratra ity ary ny tsirairay dia manana fotoana betsaka kokoa amin'ny pejy ary fotoana bebe kokoa lanin'ny isaky ny fotoana raha ampitahaina amin'ny 1 na 2 taona lasa izay. Manao fikarohana lalindalina kokoa momba ny atiny izahay ary mahita fiverenana tsara kokoa amin'ny famatsiam-bola rehefa mandeha lalindalina.
Ny niova dia tsy ny faharetan'ny saina, fa ny ezaka tafiditra amin'ny fitadiavana ny atiny. Manjary zary mpikaroka izao ny mamantatra haingana izay tadiaviny. Raha tsy mahita an'io izy ireo dia lasa. Fa raha mahita izy ireo dia mandany fotoana be dia be amin'ny famakiana, fikarohana ary fizarana izany mihitsy.
Raha mahita ny fihenan-tsasatra lany amin'ny fotoana amin'ny pejy na tranokala ny orinasanao dia mety noho ny antony maro izany:
Tsy mifanaraka amin'ny atiny ny lohateninao. Angamba mampiasa fomba linkbait ianao hamitahana olona ary avy eo tsy manankarena ny atiny - izay hahatonga ny olona hiala!
Manatsara ny votoaty diso ianao. Ny fananana ny tranokalanao mandritra ny taonina maro ny teny fanakambanana izay tsy anananao fahefana dia afaka mampiakatra ny tahan'ny fihenam-bidy ary mampihena ny fotoana laninao amin'ny tranokalanao. Manorata amin'ny tanjona - isaky ny avy!
Nampiroborobo ianao tamin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra karama karama tsy voatsara Ny mpitsidika vaovao rehetra amin'ny tranokalanao dia mety handany fotoana kely kokoa noho ireo olona miverina. Ny fampihenana ny fampielezan-kevitra dia mety hisy fihenan'ny fotoana amin'ny tranokala rehefa hitan'ny mpitsidika vaovao (na tsy mahita) izay ilainy.
Tsy mampiasa vola amin'ny paikadin'ny votoaty izay mandrisika ny firosoana lalina kokoa ianao - toy ny infografika, fampisehoana, ebooks, whitepapers, fandinihana tranga, fijoroana vavolombelona, ​​horonantsary manazava, fitaovana ifandraisana, sns.
Ny votoatin'ny snackable dia tsy paikady haparitaka satria mihena ny faharetan'ny fifantohana (tsy izy ireo!). Ny atin'ny snackable dia ireo sombin-mofo izay mitarika ny olona mankamin'ny tranokalanao amin'ny lohahevitra mifandraika amin'izany mba hahitan'izy ireo fifandraisana bebe kokoa amin'ny vaovao tadiavin'izy ireo.
Hanome fanamby anao aho mba hanao fandalinana ny fiovam-po sy ny fotoana amin'ny pejy na tranokala ary ho hitanao fa ny atiny miova fo dia votoaty lava be. Ny fikarohana voalohany, taratasy fotsy, fandinihana tranga ary lahatsoratra bilaogy feno antsipiriany momba ny fampahalalana dia mitohy mitarika fifandonana an-taonina maro ary mitarika fiovam-po.
Mampivelatra ny tetik'asa ara-barotra ao amin'ny marketing Tokony hampiditra atiny fananganana ambaratonga samihafa amin'ny fifamatorana ka, rehefa lasa liana kokoa ny mpanjifa na ny orinasa dia afaka milentika lalindalina kokoa amin'ny fikarohana ilainy izy ireo.
Ny votoatin'ny snackable dia misy ny toerany, fa tsy natao ho an'ny fotoana fohy hisarihana. Ho an'ny ezaka kely indrindra sy ny mpihaino midadasika kokoa hisarihana ireo mpitsidika hiditra lalindalina kokoa! Manempotra ny rano izany raha mbola miandry ny tanjona kendrenao ny tena maunu.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ity infographic avy any Oracle ity dia manana fomba fijery tsara momba ny paikadin'ny votoatin'ny snackable.
Tags: Sary torohayOracleatiny azo nohaninafotoanaora amin'ny pejyfotoana eo amin'ny toeranafotoana lany amin'ny fivorianafotoana lany amin'ny pejyfotoana lany amin'ny tranokala
Dec 24, 2014 amin'ny 8: 59 AM
Maivamaivana aho mandre fa mandany fotoana bebe kokoa hianarana ny pejin'ny mpanjifanao ny mpitsidika tranonkala raha oharina amin'ny 1 – 2 taona lasa izay. Ao anatin'ny tontolon'ny fanamafisam-peo amin'izao fotoana izao, dia midika izany ho antsika izay mino ny fampiasam-potoana hamoronana votoaty voadinika tsara!
Dec 29, 2014 amin'ny 9: 56 AM
Mamirapiratra izany! Tena faly aho fa tsy nihena ny maha-zava-dehibe ny votoaty manankarena sy maharitra.
Tiako raha misy olona manao fanambarana tsy manam-paharoa sy feno fahasahiana izay manohitra ny fiheverana malaza